SSE: BAAQ TAAGEERO AH Ujeeddo: Taageerid Mowqifka Golaha Guurtida ee ku Aaddan Madax Dhaqameedka Somalia.(WEDNESDAY - 12/September/2012)
Inkasta oo aan aad loo shaacin waxa dhawaan Jamhuuriyadda Somaliland yimid wafti isugu jira qolyo ka socda Dawlada Finland iyo oday dhaqameed ka socda waddanka aynu dariska nahay ee Soomaaliya. Waftiga oo uu ururkaa Finland ka socdaa gadh wadeen u ahaa waxay dalbadeen inay la kulmaan Golaha Guurtida Jamhuuriyada Somaliland. Ujeeddada safarka weftigaasi isku dhafan may caddayn. Waxase markii dambe soo baxday inay u socdeen inay madax dhaqameedka Soomaaliya ka socdaa cashar ka bartaan Golaha Guurtida Somaliland.
Waxaa kaloon ugu hambalyaynaynaa Golaha Guurtida inay ogaadeen dabinnada Beesha Caalamka badhkood ay u maaleegayaan qaddiyada jiritaanka, madaxbannaanida, iyo midnimada ummadda ku dhaqan Somaliland. Golaha Guurtidu wuxuu laf dhabar u yahay qarannimada Jamhuriyadda Somaliland.